Lego အသစ် Star Wars Halloween shorts များတွင် The Mandalorian တို့ပါဝင်သည်
အသစ်ငါးခု Lego Star Wars The Mandalorian မှဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င် Halloween အတွက်အဆင်သင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Halloween မစတင်မီတစ်လကျော်သာလိုပါတော့သည် Lego အုပ်စုသည်ရာသီအစောပိုင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည် အသစ်အစုံ ကဲ့သို့ 40497 ဟယ်လိုဝှေး ယခုရရှိနိုင်။ သို့သော်လတ်ဆတ်သောရွေးချယ်မှုများမှတည်ဆောက်သည် Star Wars ပွဲတော်မတိုင်မီ Halloween ကိုလည်းကျင်းပကြသည် အထူးတိုးချဲ့သည် startလွှင့်နေသည် Disney+.
ဘောင်းဘီတိုအသစ် ၅ စောင်ကိုတင်လိုက်သည် Lego Group ၏တရားဝင် YouTube channel ကိုအချိန်မလွန်မီကူညီရန် Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များကိုကြည့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာ၎င်းတို့အားလုံးကိုကာတွန်းစုစည်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Grogu မှ Ahsoka Tano သို့ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် galaxy star တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောဇာတ်ကောင်များနှင့်ပုံစံအချို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Din Djarin သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုများကိုပင်ပြန်လည်ပြုလုပ်သည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starshipဒါပေမယ့်အစီအစဉ်နဲ့မကိုက်ဘူး ငါတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်.
နောက်ထပ်တိုတိုတစ်ခုက The Bad Batch သည် Battle Droid ကိုသင်္ဘောပျက်များနှင့်ရွှေဖရုံသီးများမှကယ်တင်နေသည်၊ သို့သော်သူတို့ကိုရိတ်သိမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုကူညီရန်အလုပ်မလုပ်ပါ။ 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း
တရားဝင်တွေ့ရှိသမျှ set တိုင်း Lego Star Wars Halloween အပါအ ၀ င်ဘောင်းဘီတိုများယခုရရှိနိုင်ပါပြီ Mandalore အပေါ် 75310 Duelမရ။ သင်သူတို့ကိုပြီးသည်နှင့်အဘယ့်ကြောင့်မပြုလုပ်သနည်း Trailer ကိုပြန်ကြည့်ပါ ဘို့ Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များကိုဆက်ဖတ်ပါ အဲဒီထဲမှာငါတို့တွေ့တဲ့အရာလေးခု.
← LEGO Seasonal 40499 Santa's Sleigh အသစ်ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ
LEGO ဆောင်းရာသီကျေးရွာ ၁၀၂၉၃ Santa's Visit ကို VIP များအတွက်ယခုရနိုင်သည် →